ဓာတ်ပုံ Compress Download | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ဓါတ်ပုံပညာ Apps ကပ » ဓာတ်ပုံ Compress
ဓာတ်ပုံ Compress APK ကို
ဓာတ်ပုံ Compress သင်သည်အလျင်အမြန်သင့်ရဲ့ရုပ်ပုံအရွယ်အစားသို့မဟုတ် resolution ကိုလျော့ချကူညီပေးသည်။ အရည်အသွေးနှင့်ဖိုင်အရွယ်အစားစုံလင်သောချိန်ခွင်လျှာနှင့်သင်၏ပုံရိပ်တွေပိုကောင်းအောင်။ Lit ဓာတ်ပုံကိုလည်းအခမဲ့နှင့်သင့် photos.Photo Compression ကဓါတ်ပုံရဲ့ဖိုင်အရွယ်အစားလျှော့ချဖို့စမတ် lossy compression နည်းစနစ်ကိုအသုံးပြုသည်ကောက်ပဲသီးနှံများနှင့်လှည့်ဖို့လျှောက်လွှာသုံးစွဲဖို့စူပါလွယ်ကူပါတယ်။ ရွေးချယ်ပုံတွင်အရောင်အရေအတွက်ကိုကျဆင်းခြင်းအားဖြင့်, နည်းပါးလာ bytes ဒေတာသိမ်းဆည်းထားရန်လိုအပ်သည်။ အဆိုပါအကျိုးသက်ရောက်မှုနီးပါးမမြင်ရတဲ့ဖြစ်ပါသည်ဒါပေမယ့်ဖိုင်အရွယ်အစားအတွက်အလွန်ကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်ကို! သငျသညျသူတို့အလိုအလြောကျအမည်ရသီးခြားဖိုင်တွဲထဲတွင်သိမ်းဆည်းကြောင့် '' LitPhoto 'ကို manually အရွယ်အစားပြောင်းဓါတ်ပုံတွေကိုကယ်ဖို့ရှိသည်နှင့် build-in ကိုပြခန်း app.If သင်သည်အလျင်အမြန်ပုံအရွယ်အစားလျှော့ချဖို့လိုခငျြနေတဆင့်လက်လှမ်းဖြစ်ကြောင်း, Lit ဓာတ်ပုံစုံလင်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်ပါဘူး ။
ပုံရဲ့မလိုချင်တဲ့ဝေမျှဖယ်ရှားပိုကောင်းသင့်ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုထိန်းညှိဖို့မရရှိနိုင်များစွာအချိုးအကြားရွေးချယ်ဖို့သီးနှံလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုသုံးပါ။ tool ကိုယခင်ကသီးနှံစိုက်ပျိုးဤဓာတ်ပုံပုံရိပ်ကိုသီးနှံမှ Google Play store ဓာတ်ပုံကိုဖြတ်တောက်မှုအပိုင်း tool ကိုတို့တွင်ပုံနဲ့ cropvs ဘို့နယ်စပ်မျဉ်းနှင့် cropic app ကို photoediter အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်နှငျ့သငျ image ကိုထက်မြက်နိုင်ပါတယ်။
ဓာတ်ပုံ Compress သငျသညျလူမှုရေးကွန်ရက်ကနေတဆင့်သင့်ရဲ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူဓာတ်ပုံများဝေမျှခြင်းမပြုမီဓာတ်ပုံများချုံ့ကူညီပေးသည်။ သငျသညျ attachment ဓာတ်ပုံများနှင့်အတူ e-mail ပို့လာတဲ့အခါသင်မကြာခဏ e-mail ကိုမက်ဆေ့ခ်ျကိုအရွယ်အစားကန့်သတ်ထက်ကျော်လွန်ကြောင်းတွေ့လိမ့်မည်။ သင့်ရဲ့အီးမေးလ်အကောင့်ကိုသင်5megabytes (MB) မှမက်ဆေ့ခ်ျကိုတက်ပေးပို့ဖို့ခွင့်ပြုနှငျ့သငျ (ကဖုန်းသို့မဟုတ် Tablet ကိုကင်မရာတို့ကခေါ်ဆောင်သွားဒီနေ့ရဲ့ဓါတ်ပုံတွေကို5သို့မဟုတ် 8 ကို MB အကြောင်းကိုဖြစ်ကြသည်) ပူးတွဲ့နှစ်ခုရုပ်ပုံများပါဝင်သည်လျှင်ဥပမာ, သငျသညျဖြစ်ကောင်းကျော်လွန်ပါလိမ့်မယ် အများဆုံးသတင်းစကားအရွယ်အစား။ ကအများဆုံးအီးမေးလ်အကောင့်နဲ့ဆက်စပ်အများဆုံးမက်ဆေ့ခ်ျကိုအရွယ်အစားကန့်သတ်ကျော်လွန်ရှောင်ရှားရန်ကူညီပေးသည်ဖြစ်သောကြောင့်ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ဒီပုံကိုအရွယ်အစားပြောင်း app ကိုအလွန်အသုံးဝင်သည်။ e-mail ကိုရေးသားမတိုင်မီဓာတ်ပုံများကို Compress, ပြီးတော့အများကြီးသေးငယ်ဓါတ်ပုံပူးတွဲ။
စမတ် Image ကိုအရွယ်အစားပြောင်းအင်္ဂါရပ်များ:
* အသုတ်လိုက် compress (မျိုးစုံကိုဓာတ်ပုံများ compress)
* မူရင်းဓါတ်ပုံတွေကိုချုံ့ဓါတ်ပုံတွေကိုအလိုအလြောကျ '' LitPhoto '' directory ထဲတွင်သိမ်းဆည်းထားသည်, ထိခိုက်ကြသည်မဟုတ်
* ပုချုံ့ဓါတ်ပုံများ၏အလွန်ကောင်းသောအရည်အသွေးနှင့် optional ကို compress အရည်အသွေးကို
* လှည့်ပါ 90 နေဖြင့်ဓာတ်ပုံဓာတ်ပုံဖြတ်တောက်ပြီးတော့လက်ယာရစ်နှင့်ဖြစ်စေ°
* ဓာတ်ပုံပေါ်သီးနှံဧရိယာလှည့် / အပြောင်းအရွေ့ချဲ့ဖို့လက်ညှိုးကိုသုံးပါ
လူမှုရေးကွန်ရက်ကနေတဆင့်သင့်ရဲ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ * ဝေမျှမယ်ဓါတ်ပုံ:
ဆိုရှယ်မီဒီယာ (စသည်တို့ကို Instagram ကို, Facebook, Flickr, Google+ မှာ, VKontakte, KakaoTalk) မှ shared
* ရိုးရှင်းသော UI ကိုနှင့်အတူအသုံးပြုရလွယ်ကူ, esaily သင်၏ဓါတ်ပုံများ Browsing နှင့်ကိုင်တွယ်
လက်မနှုန်း Mega pixels ထောင်ပေါင်းများစွာ၏နှင့်သင်၏ဖုန်းတွင်မြင့်မားသောအဓိပ်ပါယျကင်မရာရှိခြင်းသည်ကြီးပေမယ့်သင့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုရန်သင့်ဓာတ်ပုံများကိုမပို့နိုင်လျှင်, သင်ကဲ့သို့ကောင်းစွာခရုစာတိုက်ပုံးထဲမှာသင့်ဖုန်းနှင့် charger ကိုပစ်နှင့်သင့်ကပယ်တင်ပို့မယ် မိတျဆှေ, ညာ? ဘယ်တော့မှမနောက်တဖန်! ကျုံ့ကာလက်ငင်းအတွက်သင်၏ဓါတ်ပုံများ Share! သင့်ရဲ့ကလေးတွေ၏ရုပ်ပုံများ, ဖျော်ဖြေပွဲများနှင့် ... ဝေးရချုံ့ပါနှင့်မျှဝေမပြုခဲ့ကြောင်းပင်တဦးတည်း!
1.80 ကို MB
Panda ဗီဒီယို ...
ပြခန်း - ဓာတ်ပုံ ...